प्रचण्ड र स्वराजबीचकाे भेटवार्ता सम्पन्न, के भयाे सहमति ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रचण्ड र स्वराजबीचकाे भेटवार्ता सम्पन्न, के भयाे सहमति ?
प्रचण्ड र स्वराजबीचकाे भेटवार्ता सम्पन्न, के भयाे सहमति ?
माघ १९ गते, २०७४ - ११:०१
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजबीचकाे भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ ।
होटल सोल्टीमा गरेको भेटमा संविधान कार्यान्वयन र दुई देशबीचको आपसी हित र चासोका बिषयमा छलफल भएको छ । भेटमा भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजले नेपालमा संविधान कार्यान्वयन सफलतापुर्वक अगाडी बढिरहेको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन ।
नयाँ जनमतप्रति भारत सकारात्मक भन्दै जनादेश अनुसार बन्ने नयाँ सरकारलार्इ स्वराजले आफ्नो पुर्व घोषित प्रतिवद्धता पुरा गर्ने बताईन । सबैखाले सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताएकी छन् । भेटमा अध्यक्ष दाहालले नेपालको विकासमा भारतले विगतमा पनि सहयोग गर्दै आएको स्मरण गरे ।
स्वराजले आजै राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ । त्यसअघि स्वराजले प्रचण्डस‌ंग भेटेकि हुन् ।
यसअघि, हिजो बिहीबार विदेशमन्त्री स्वराजले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग होटल सोल्टीमा करीब पौने घन्टा भेटवार्ता गरेकि थिइन ।
माघ १९ गते, २०७४ - ११:०१ मा प्रकाशित